Wednesday March 21, 2018 - 21:18:45 in Wararka by Super Admin
Sheekh Yuusuf Sheekh Ciise Sheekh Axmad (Koba ku dukade) oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee Sh/dhexe oo wareysi gaar ah siiyay warbaahinta islaamiga ah ee Al-furqaan ayaa ka hadlay mawaadiic muhiim ah.
Barnaamijka Dhuuxa wareysiyada ayaa waxaa caawa lagu baahiyay qeybta kowaad ee wareysiga oo laga heli karo macluumaadyo soo jiidasho leh oo ku saabsan 10 sano kadib sida ay tahay xaaladda wilaayada.
Ugu horreyn wuxuu is barbar-dhig ku sameeyay mudada tobanka sano ah ee ay wilaayadu joogto iyo xilliyadii fowdada ee ka horreeyay isagoo soo saaray natiijo ka marqaati kacaysa farqiga labada xilli iyo waxa uu maamulka islaamiga ah ka badalay noloshii bulshada oo dhan.
Sheekhu wuxuu sheegay in qabaa’ilku ahaayeen kuwa labo-labo la isugu diro iyagoo sannad kasta iska dili jiray dad boqollaal ah, laakin markii uu maamulka islaamigiihi yimid illaa maanta aanan hal qof lagu dilin gobolka, taasoo sababtay in dadku walaaloobaan oo horumarka ka shaqeeyaan markii shareecada islaamka lagu mamaulay.
Sheekh Kaba ku dukade ayaa sidoo kale sheegay in ay horumar dhanka xadaaradda iyo dhismaha ah sameeyeen degmooyinka iyo degaanada gobolka iyadoo dhaqaalaha bulshaduna uu kobcay maadaama ay jirto nabad la isku halleyn karayo.
Mar wax laga weydiiyay maamulka Hir-Shabelle ayuu ku macneeyay inuu yahay mid maqaar saar ah wuxuuna tusaale usoo qaatay haba uu u dhisan yahay iyo sida uu shisheeyaha ugu daaban yahay, waxaana uu tacliiq xikmad leh ka bixiyay magaca uu wato maamulkaas Hirshabelle.
"Haddii magaca Hirshabelle, dowlad Soomaaliyeedoo Xamar joogta ay bixin lahayd ‘Shabell-Hir’ ayuu noqon lahaa, asbaabtu maxay tahay waxaa soo xigta Shabelle, laakin haddii Adis-ababa laga xukumaayo waa … magacaan marka Itoobiyaa la baxday Adis-ababaa laga xukumaa waa qismiga kasoo gaaray Itoobiya dhulkaan, arrintaasu marka waa mid ka muuqata magaca” ayuu yiri’ Sheekh Yuusuf Kaba ku dukade, waaliga wilaayada islaamiga ah ee Sh/dhexe.
Sheekha ayaa sidoo kale ka hadlay musaalixada qabaa’ilka iyo juhdiga ay shisheeyahu mar walba ku bixiyaan marin habaabinta bulshada iyo sidii ay isaga hor keeni lahaayeen, taa badalkeedana wuxuu sheegay in juhdigoodu uu yahay mid joogto ah oo hadafkiisu yahay si loo fashiliyo admaacda gurracan ee shisheeyaha.
Halkan ka degso Q-aad Waraysiga Waaliga Wilaayada islaamiga ee Sh/dhexe Sh/Yuusuf Kabakutukade